Sida loo rakibo beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 13 | Wararka IPhone
Beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 13. Waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo
Ignacio Sala | | macruufka 13
Beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 13 hadda waa la heli karaa, labadaba iPhone iyo iPad, si markaa dhammaan kuwa isticmaala dulqaadka ugu filan ay u sugaan inta la bilaabayo iyadoon loo baahnayn inay la soo degsadaan IPSW, iyagoo ku rakibaya barnaamijyo aysan waligood dib u isticmaali doonin iyo wixii la mid ah. bisha Luulyo, laakiin waxay u muuqataa in Apple ay rabto inay ka faa'iideysato waqtiga.
Haddii aadan weli rakibin mid ka mid ah labada betas ee Apple ay hadda sii deysay ee iOS 13 ee loogu talagalay bulshada horumariyaha, waxay u badan tahay in hadda lagugu dhiirigelinayo inaad sidaas sameyso, tan iyo habka loo rakibo beta bulshada waa mid aad u fudud Mana u baahna aqoon weyn, waa inaad raacdaa talaabooyinka aan hoos ku faahfaahinayno.
1 Wax walba kahor, keyd
2 IOS 13 Qalabka La-jaanqaadi karo
2.1 IPhones la jaan qaada macruufka 13
2.2 IPads la jaan qaada macruufka 13
3 IPads la jaan qaada macruufka 13
4 Sida loo rakibo beta-ga dadweynaha ee iOS 13
5 Muxuu noo fidiyaa iOS 13
Wax walba kahor, keyd
Ka hor intaadan bilaabin inaad si deg deg ah u rakibto oo u socodsiiso macruufka ugu horreeya ee dadweynaha 13, waa inaan maskaxda ku haynaa in, sida beta ay tahay, ma ahan nooca ugu dambeeya, sidaa darteed qalabkeenna waxay soo bandhigi kartaa cillad, reboots, xiritaanka arjiga ...
Sidoo kale, inta lagu gudajiro nidaamka rakibida, wax way dhici kartaa oo waa lagu qasbi karaa inay soo celiso aaladda aan ka soo xoqno, sidaas darteed waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso nuqul ugu horreyn iTunes oo dhan, si markaa ay dhacdo inuu fashilmo wax, waxaan haynaa nuqul qalabkeena ah si aan u awoodno inaan dib u soo celino oo aan uga tagno terminaalkeena sidii bilowgii.
Suurtagal maaha inay wax dhacaan inta lagu jiro rakibidda, Cidna Dooni mayno, laakiin waa suurtagal ah Maxaa dhacaya, iyo maadaama aysan aheyn wax xun in lagu bogsado caafimaadka, sameynta kaydinta waligeed ma ahan wax xun, gaar ahaan haddii waxa noogu muhiimsan ay yihiin sawirrada iyo fiidiyowyada. Haddii aad tahay isticmaaleyaasha iCloud, uma baahnid gurmad, maxaa yeelay dhammaan sawirrada iyo fiidiyowyada ayaa lagu kaydiyaa daruuraha.
Laakiin halkan, iyo inaad ka fogaato xanaaqa aan loo baahnayn, samee kayd ka hor intaadan raacin talaabooyinka aan hoosta ku faahfaahinayo ku rakib beta iOS-ka dadweynaha.
IOS 13 Qalabka La-jaanqaadi karo
Imaatinka macruufka 13, Apple wuxuu ka baxay wareegga cusbooneysiinta aaladaha ilaa iyo hadda lagu maareeyay wax ka yar 2 GB oo xasuusta RAM ah, sidaa darteed qalabka haray ilaa dhammaadka maalmahooda ee iOS 12 waa iPhone 5, iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus.
Haddii aan ka hadalno iPad-ka, waxaan helnaa dhibaato isku mid ah, maadaama dhammaan iPads-yadaas oo ka yar 2 GB oo RAM ah ay ku harsan yihiin iyadoon la cusbooneysiin. Waxaan ka hadlayaa iPad Mini 2, iPad mini 2 iyo iPad Air qarnigii XNUMXaad.
IPhones la jaan qaada macruufka 13
iPod taabashada 7aad
IPads la jaan qaada macruufka 13
iPad Air jiilka 3aad 2019
9.7-inji iPad Pro
10.5-inji iPad Pro
11-inji iPad Pro
12.9-inch iPad Pro (jiilalka oo dhan)
Sida loo rakibo beta-ga dadweynaha ee iOS 13
Ugu horreyntii, waa inaan caddaynno aaladda aan rabno inaan ku rakibno, tan iyo markii hawshu socoto waa in si toos ah looga sameeyaa qalabka la sheegayo, ma ahan kombiyuutar.
Mar alla markii aan ka caddeynno qodobkii hore, waa inaan soo booqanno Bogga barnaamijka beta ee dadweynaha, dhagsii U heeso, waxaan galnaa xogta Aqoonsigeena Apple inaad gujiso Ku hees.
Haddii aan hawlgalinay xaqiijinta laba-tallaabo, waxay u badan tahay in haddii aynaan sidaa yeelin ka hor, waa inaan xaqiijinnaa inaan nahay milkiilayaasha sharciga ah ee koontada iyada oo loo marayo lambarka Apple noo soo dirayo.
Qeybta bilaabo dhagsii Qor Qalabkaaga.
Kadib waxaan aadeynaa Ku rakib astaan oo guji Soo qaado faallo si loo soo dejiyo shahaadada noo oggolaan doonta inaan soo dejino mid kasta oo ka mid ah macruufka 13 betas.
Marka astaanta la soo dejiyo, waxaan aadeynaa Settings> General> Profiles oo waxaan gujineynaa astaanta IOS 13 / iPadOS Beta Software in la sii wado si loo rakibo. Markii la rakibo, qalabku wuxuu nagu casuumi doonaa inaan dib u bilowno.
Marka terminal-ka dib loo bilaabo, waxaan aadeynaa Dejinta> Guud> Cusboonaysiinta softiweer oo waxaan eegi doonaa sida aan horeyba u haysannay beta-kii ugu horreeyay ee iOS 13 si aan ugu rakibno aaladdayada.
Isdiiwaangalinta barnaamijka beta 13, qalabkayagu wuxuu heli doonaa dhamaan betasyada laga siidaayo macruufka 13, maahan oo kaliya kuwa lasii daayay ilaa nooca ugu dambeeya ee macruufka 13. Marka hadii aan kaliya rabno inaan tijaabino faa'iidooyinka kahor intaan qof kale lasiinin by noocaan cusub ee macruufka ah, waa inaan xasuusano tirtir astaanta markii nambarka ugu dambeeya la sii daayo Sebtember.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid howsha, waxaad igu weydiin kartaa faallooyinka ama waxaad ku biiri kartaa sheekada Maanta Telegram iPhone halkaas oo aan horeyba uga badneyn 750 qof oo aan weydiino wixii su'aalo ah ee aad qabtid.
Muxuu noo fidiyaa iOS 13
Haddii aad si joogto ah u akhrido iPhone News, waxay u badan tahay inaad horay u ogtahay inta badan wararka ka imanaya gacanta iOS 13 iyo iPadOS. Haddii aysan tani ahayn, waxaan kugu martiqaadayaa inaad dhex marto maqaalkaas si aad u bilowdo isku day mid kasta oo ka mid ah riwaayadaha cusub ee ku imaan doona qaybtiisa ugu dambeysa laga bilaabo Sebtembar oo waxay la soo wareegi doonaan gacanta moodooyinka cusub ee iPhone.
Halkan waxaan ku tusaynaa qaar ka mid ah war ka iman doona gacanta iOS 13:
Waxqabadka Ku gal Apple (hawlgal la mid ah kan noo oggolaanaya inaan adeegsanno aqoonsigeenna Google ama Faebook si aan u adeegsanno adeeg ama adeeg)
Memojis shaqsi ahaaneed illaa faahfaahinta ugu yar
Xiriir cusub ee arjiga Sawirada
Suurtagalnimada isku xirka laba AirPods isla iPhone-ka ah
Warka shaqeynaya ee CarPlay
PS4 iyo Xbox One iswaafajinta.
Qalabka widget-ka ee shaashadda (iPad)
Ku fur isla codsi laba daaqadood oo kala duwan (iPad).
U isticmaal jiirka ipadka
Tilmaamo cusub oo la koobiyeeyo oo la dhajiyo
La wadaag fayl iCloud.
Faylasha ayaa hadda awood u leh inay akhriyaan nooc kasta oo disk disk ah oo isku xidhan iyo faylal furan iyaga oo aan marka hore nuqul ka dhigin qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 13. Waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo
Haye, haddii aan haysto beta 2 rakibay, ma dhejin karaa beta-kan? Beta-kan dadweynuhu miyuu ka fiicnaan doonaa beta 2?
Ku jawaab Jacman
Aragti ahaan waa isku mid beta, waxa kaliya ee la badalayaa waa lambar siinta horumariyeyaasha (beta 2) iyo dadka isticmaala barnaamijka beta beta (beta 1)
Haddii aad horey u rakibtay, uma baahnid inaad wax uun samayso gabi ahaanba.
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa iPad mini 2, waxaan ku sameeyay wax kasta oo halkan ku qoran, laakiin markii ay dib u bilaabato oo aan u aado guud ahaan, cusbooneysiinta software-ka, iOS 13 beta beta ma muuqdo, laakiin midkii aan horay u iri Software-ka waa la casriyeeyay .12.4.6. Maxay ugu muuqan weyday inay cusbooneysiiso? Haddii qof i caawin karo. Mahadsanid n
Harry Potter: Wizards Unite - Pokemon GO Magic Wuxuu Imaanayaa iOS
Ka faa'iideyso qiimo dhimista alaabooyinka guryaha ee Koogeek